Famantarana ny kintana Aries: ny toetran'ny Aries, ny toetrany, ny toetrany - Famantarana Zodiac
Famantarana Aries: toetra, toetra ary toetra mampiavaka azy
Alefa! Alefa! Alefa!
Aries no batery ohabolana an'ny zodiaka . Ny hafanam-pony amin'ny ankapobeny sy ny heriny tsy manam-petra dia mahatonga ny olona rehetra manodidina azy hahatsiaro ho reraky ny fijerena fotsiny ny hetsika rehetra. Mahagaga ny zavatra vitan'ity Sun Sign ity amin'ny fifantohana, fa ny kalitaon'izy ireo manavotra indrindra dia ny herimpon'izy ireo.
Lisitry ny atiny misy ny sonia Aries
Symbol Aries sy ny dikany
Fikarohana momba ny zava-misy sy metafizika
Ankizy Aries (Tovovavy sy zazalahy)
Asa, Pets & fialam-boly
Fanomezana tsara indrindra ho an'ny Aries
Miverina amin'ireo famantarana Zodiaka Andrefana rehetra
Toetra, toetra maha-olona ary toetra mampiavaka an'i Aries
Ny Aries dia hiditra amin'ny toerana izay tsy misy olon-kafa sahy handeha, mitafy ny persona praiminisitra sy 'ram' azy ireo ao anatin'ny olana iray.
Ny Aries dia tsy mijaly amin'ny fisorohana - tongava amin'ny tanjona ary mahazoa zavatra.
Ny olona sasany ao amin'ny boriborin'ity biby Zodiac ity dia mahita an'i Aries ho manetsika, ary ny Aries dia afaka manao zavatra tsara handinihana ny fomba fijeriny farafaharatsiny. Angamba indraindray ny fijanonana sy ny fikasana kely dia mety hisoroka anao amin'ny fifanolanana tsy mahafinaritra.
Rehefa manana Aries amin'ny fiainanao ianao dia miatrika ny planeta mitondra an'i Mars, izay Andriamanitra ady. Noho izany ny ramanao dia tsy ho afaka hipetraka miatrika ny fifanolanana na ny sakantsakana.
Tsy hanao 'ady' foana ny Ram, fa tsy izy ireo ihany koa no hanome T-shirt fandriampahalemana amin'ny hery. Ny lesona manan-danja ho an'ny ankamaroan'ny Aries dia ny fomba hakana an'io fehin-kery io sy hitadiavana fomba hampiharana azy amin'ny saina sy mazava, tsy misy fanehoan-kevitra tampoka.
Ara-dalàna Aries dia eo ambanin'ny fanapahan'ny AFO . Manampy ireo tahirin'ny angovo Ram ihany koa io, nefa koa mamorona tontolo iainana tsy takatry ny saina. Ny Aries dia mety ho mafana sy mamirapiratra na tadio may.
Soa ihany ireo izay manaraka an'i Aries amin'ny fifanoherana koa mahita fa mahafantatra ny fomba hahatafitana velona, ​​ary tsy misalasala mampindrana ireo fahaiza-manao ireo amin'ny toe-javatra sarotra raha toa ka nihaino ny fitarihan'ny Ram ny mpanaraka.
Toetra sy toetra mampiavaka ny Aries
Ny 'fanapahana' an'i Aries dia manana geometry voafaritra miaraka amin'ny saokany voaka sy vava voafaritra tsara. Noho ny haavon'ny asany, ny vatany dia mazàna nohajaina, atletika ary bika tarehy.
Fahendrena ara-pahasalamana ity Sun Sign ity dia tsy manana olana amin'ny fihazonana azy. Ny lohany ihany no ampahany amin'ny vatany izay tokony hiambina tsara. Raha toa ka mikasa ny hiditra amin'ny fanatanjahan-tena tsy fanararaotana aretin-doha miaro ny Aries dia tsy safidy izany.
Mariho fa ireo teraka teo ambanin'ity famantarana astrolojia ity dia manana metabolisma tsy tena izy (eny, saro-piaro isika rehetra) saingy midika izany fa tena mila mihinana sakafo izay mitazona azy ireo izy ireo nefa tsy manao sorona sakafo.
Ny tantaran'ny Aries dia mifamatotra amin'ny angano grika momba ny Volom-bolamena. Ny tantara dia milaza fa i Poseidon no rain'ny Ram, izay notolorana fanomezana ho an'ny Mpanjaka Aeetes. Napetraky ny mpanjaka teo ambanin'ny fiarovan'ny dragona ilay volon'ondry volamena. Mandra-pahatongan'i Jason (an'i Jason sy ny lazan'i Argonauts) ny volon'ondry dia tsy afaka naka ny toerana sahaza azy teo amin'ny seza fiandrianan'i Tessaly izy. Nahomby i Jason tamin'ny fanampian'ny Medea ary nametraka ny volon'ondry tao amin'ny tempolin'i Zeus.
Ny iray amin'ireo lafiny manan-danja amin'ny Aries dia ny niampitan'ny Masoandro ny ekoatera izay mianavaratra mianatsimo amin'ny Vernal Equinox. Manamarika ny andro voalohan'ny lohataona ity, izay nampitombo ny fifamatoran'ity antokon-kintana ity tamin'ny afo.
Fikambanana Aries & Metaphysical Associations
Daty: 21 martsa - 19 aprily
Marika: Ilay Ram
Andian-teny lehibe: 'Izaho dia'
Planeta: ny diabe
Birthstone: Aquamarine (martsa); Diamondra (aprily)
Nomery hovitrovitra: Nomery 9
Voninkazo: Honeysuckle & Sweet Pea
Kambana Zodiac Sinoa: Dragon
Kambana Zodiac Shinoa mahatsikaiky: Dragon
Fikambanana Tarot Card: Ny Emperora (Aries) & Ny Tilikambo (Martsa)
Kristaly fanasitranana: ametysta , Bloodstone , Carnelian , Coral , Malachite , Rose Quartz
Aries malaza: Erica Jong, Elton John, Victoria Beckham, Lady Gaga, Vincent Van Gogh, Thomas Jefferson
aiza ny uranus hita ao amin'ny rafi-masoandro
Aries mifanentana, amin'ny fitiavana sy amin'ny fandriana
Amin'ny fifandraisana dia mety ho olon-tiana ny Ram, tsy matahotra ny manandrana zava-baovao. Ny namana tsara indrindra ho an'i Aries dia Leo SY Sagittarius arahin'ny faharoa Gemini SY Aquarius .
Te hahafantatra bebe kokoa? Vakio manontolo Mombamomba ny Aries mifanentana .
Ilay zaza Aries
Ny teny nap dia tsy misy amin'ny voambolan'i Ram. Soa ihany ianao fa hampiditra azy ireo ao am-pandriana amin'ny alina. Be loatra ny zavatra hita sy azo atao, ary ny zanakao Aries dia maniry azy REHETRA. Misy hafanam-po areti-mifindra momba ireo ankizy ireo izay manintona ny hafa.
Na inona na inona isan'ny namana, na izany aza, ny Ram-nao dia te-hivoaka eo ambonin'ilay entana. Raha tsy afaka izy ireo na raha tsy maharaka ny namany dia vetivety dia sosotra sy milavo lefona ary miroso amin-javatra hafa.
Tsy maninona ny taonany, ho hitanao ny Ramanao tsy matahotra hiteny ny sainy. Mety tsy hihazona ilay raharaha izay niteraka fihetsika mahery vaika izy ireo, saingy tsy hisy hanadino izany. Izany no singa afo sy Mars amin'ny zanakao. Tsy voatery hanana ny toerany diplomatika izy atsy ho atsy.
TENY: Ny ankizy Aries dia mahazo tombony bebe kokoa amin'ny fotoana fohy amin'ny fotoana fohy noho ny fifanandrinana amandrenin'ny ray aman-dreny.
Te hahafantatra bebe kokoa? Vakio manontolo Aries momba ny fanandroana zaza .
Ny zazavavy Aries dia mety ho ilay kilasy kilasy, vonona foana miaraka amina valiny tampoka amin'ny toe-javatra rehetra.
Tsy hatahotra fitsapana na sahy izy, ary tena mandroso amin'ny fanaporofoana ny tenany. Betsaka no lasa tom-boy amin'ny adiny. Rehefa dinihina tokoa, ny fiankinan-doha no anarany afovoany, atambatra amina fizarana mahaleo tena matanjaka.
Ny tovovavy Aries dia tsy ho tia olona bossy, ary hanitsaka ny ombelahin-tongony ary hihady rehefa tojo fomba toy izany. Mety ho sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fihazonana ny fahefany amin'ny toerana mafy orina.
Te hahafantatra bebe kokoa? Vakio manontolo Mombamomba ny vehivavy Aries Girl .
Ny Aries Boy dia mihaona an'izao tontolo izao amin'ny tongotra izay toa fantatr'izy ireo ho azy fa mety manakorontana ny hafa. Handeha amin'ny fikatsahana manaraka manaraka izy, izay mahatonga azy ireo ho gaga ihany koa (na dia mampatahotra an'i Neny sy i Dada aza).
Ity son son (ho fantatrao izahay, tianay ny puns) dia tsy ho vinavinaina mihitsy na ho tafiditra ao anaty boaty ohabolana. Izany dia mahatonga azy ireo hahay hifanaraka sy afaka handresy olana maro izay hamela ny ankizy hafa hitomany. Ny fanamby ho an'ny ray aman-dreny dia ny mampifandanja izany fahatokisana mafy izany amin'ny fatra ara-pahasalamana ara-pahasalamana.
Te hahafantatra bebe kokoa? Vakio manontolo Mombamomba ny Aries Boy .
mety misy daty homamiadana ve ny homamiadana
Asa Aries, Pets & Pastime
Tsy sarotra ho an'ny Ram ny mitady asa. Ny etikan'ny asan'izy ireo dia manamora ny famohana varavarana na dia tsy manao dihy faly aza ny toekarena. Ny Ram dia mampiasa fahatokisana marina ny fahaizan'izy ireo handresy ireo mpampiasa mety hitranga.
Tena mahomby amin'ny varotra ny ondrilahy - afaka mivarotra fasika any an'efitra ianao! Ny asa ara-panatanjahan-tena dia mifanaraka aminao ary toy izany koa ny fikolokoloana sy ny fifanakalozana raharaha.
Ny Aries dia mila biby izay mitazona ny fomba fiainany mihetsika be, noho izany ny alika mavitrika dia mety.
Na izany aza, ny mahavariana, ny Rams sasany dia aleony zavaboary kely tsy misy fikojakojana kely ka tsy mila miahiahy momba izany izy ireo.
Izay mifaninana rehetra ary mandoro angovo dia manintona an'i Ram. Mety hiditra amina reenactment ara-tantara izy ireo hampiditra ny singa 'Mars', ohatra.
Maro ny Aries ihany koa no tia manao fampihetseham-batana ety ivelany toy ny hazakaza-dalao, familiana fiara sns.
Halaviro ny fahaiza-miasa amin'ny fiantsenana Ram. Mila zavatra mahafinaritra sy manaitaitra izy ireo, indrindra ny varotra vaovao na fanapahana!
Ampio ny Arieso hialoha ny lalao amin'ny haitao na manome azy ireo trinket glitzy azon'izy ireo aseho.
Na ahoana na ahoana, izay mifandraika amin'ny sakafo dia lasa lavitra mba hitsiky ny Ram.
Ara-tsaina ve aho
Nomery anjely 1111: Inona no dikan'ny 1111 amin'ny lafiny ara-panahy, fitiavana, isa ary ny dikan'ny Baiboly
Ny dikan'ny karatra Tarot dimy an'ny kaopy
Ny fanasitranana sy ny fananana amin'ny safira dia metafizika ary ara-panahy
maninona ny capricorn no manintona ny geminis
dia mpihaza sy capricorn lalao tsara
planeta inona no manana taona fohy indrindra
scorpio lehilahy scorpio vehivavy tia
vehivavy homamiadana eo am-pandriana miaraka amin'ny lehilahy taurus